In dal oo kala duwan, Qiimaha Seeraar kala duwanaan karaa - Blockchain News
In dal oo kala duwan, Qiimaha Seeraar kala duwanaan karaa
Waa maxay sababta in qiimaha dal oo kala duwan for Seeraar kala duwanaan karaan
Iyada oo ku xidhan dalka iyo crypto-dhaafsiga heerarka, qiimaha halkii hantida crypto kala duwanaan karaa. Waxaan ka fikiray arrimo dhowr ah in ay saamayn ku formation of qiimaha suuqa crypto, iyo sida ay u la xiriira goobaha juquraafi ahaaneed ee ku iibiyeyaasha cryptocurrency.
First of dhan, waxaa haboon ka fiirsaneysa inay xaqiiqda ah in weli ay jirto ma-abuurey guud ahaan aqbalay isticmaalka cryptocurrency. Waayo, qaar ka mid ah, sababta loo maalgelin waa aaminsan in si cryptocurrency mahad, technology blockchain sugnaaday mudo ah koritaanka saa'idka ah. Waayo, dadka kale, waa aaminsan in kuwa Bitcoins maanta in ay soo iibsaday mustaqbalka noqon doonaa in baahida weyn ee nolol maalmeedka. Waayo, inta kale, oo u badan tahay in ugu, sababta loo iibsan Seeraar waa jecel yihiin in faa'ido laga helo.
Sidoo kale, aynu wada ognahay in Seeraar ma laha qiimaha ah oo deggan, waa cryptocurrency ku baahsan dhaqaalaha caalamiga ah ee digital in aan la taageeray by kasta oo hanti, lama siiyo lacagta Fiat kasta, oo aanu ka tirsan gobolka kasta oo dunida. Si kastaba ha ahaatee, sida ugu badeecadda, qiimaha Seeraar waxaa la aasaasay oo ku saleysan baahida iyo waxa loogu talagalay. In si kale loo dhigo, qiimaha cryptocurrency ugu horeysay adduunka ee waa dheelitirka ah oo u dhexeeya qiimaha ay bixiyaan iibinaya iyo waxa iibsada ah diyaar u yihiin in ay bixiyaan.
Waxaa jira wadamada ay ganacsi la cryptocurrencies waa mamnuuc, iyo Seeraar toos ah oo keliya waxaa laga iibsan karaa iibiya-qeybiyeyaasha, oo aan la is-weydaarsiga crypto-dhaafsiga. Tusaale ahaan, ka dib markii caagginayo ee is dhaafsi ee Shiinaha, mugga macaamil on plattform p2p of LocalBitcoins uu u kordhay. In wadamo badan oo, si ay u soo iibsadaan Seeraar, waxaad u baahan tahay xisaab bangi iyo kaar aqoonsi. Tusaale ahaan, jaangooyaha dhaqaale South Korea ayaa si rasmi ah u mamnuucay xawaalad si qarsoodi ah, hadda ganacsatada looga baahan yahay inay dib-u-diiwaan xisaabaadka magac galay xisaab magacyada dhabta ah.
Maaddaama ay xayiraad sharciyeed, alaab Seeraar on plattforms p2p sida LocalBitcoins kartaa qiimaha ah sicir barar iyo hubi in iibsada waxa ay bixin doontaa. “qeybiyeyaasha” of Seeraar waxaa inta badan wakiil qaab shirkadaha leenahay tiro badan oo ah bitcoins iyo lacag Fiat, oo waxay u yeerin karo marka la eego ay ku iibsada yar, gaar ahaan haddii gobolka waa in baahida weyn u cryptocurrencies. Tusaale ahaan, ee South Korea Seeraar waa celcelis $ 400 ka qaalisan ee Maraykanka, iyo farqiga for iibinta iyo iibsiga noqon karaa $ 1800 si ay u $ 3000. In India, iibiyaha Seeraar waxay bixisaa lacag qiimo 20% ka badan waxa lagu rakibay ku leeyihiin suuqyada Maraykanka. Farqiga qiimaha for iibinta iyo iibsiga ee Seeraar in Hindiya ku saabsan yahay $ 1000. In Shiinaha, Heerka Seeraar yahay $ 100 ka badan ee Maraykanka, iyo lacagta lagu iibiyo oo iibsaday kala duwan ee ku xeeran $ 500. Isla mar ahaantaana, in Russia heerka Seeraar yahay $ 100 hoose oo qiyaastii u siman yihiin in heerka of cryptocurrency ee dalalka EU, iyo farqiga u dhexeeya dalab iyo sale dalab wuxuu noqon karaa oo ku saabsan $ 400. Inkastoo ay kala duwan yihiin sida qiimaha, iibinaya mar walba iibsada oo aan doorasho kale hadii ay doonayaan inay u hesho gelin World of Crypto.
suuqa crypto The weli waa mid aad u yar yar oo ka mid ah ma arki karaan waxa caga final of Seeraar waa ama waxa mustaqbalka warshadaha this eegi doonaa sida. In suuqa hadda waxaa jira tiro badan oo ah ciyaaryahan ku eryan hal gool – in faa'ido laga helo. Markaasaa waxaa taas ka dhigan tahay in maalin maalmaha ka mid ah ciyaartoyda sida ka tagi doono suuqa, iyaga waxaa la jiray qaadashada lacagta kasbadeen. Laakiin xaaladdaasi, Waxaa jira mid faa'iido muhiim ah – marka ay taasi dhacdo, baahida buuxa hoos u dhigi doontaa oo dhan cryptocurrencies qiimaha heer la mid ah waddammada oo dhan iyo dhammaan suuqyada. Ilaa this dhacay, kaliya isku day in aad ku raaxaysan waxa ka dhacaya, Xeelaysanayn ee murugsan ee maanta taagan.
Qiimaha Seeraar kala duwanaan karaa
Mark Zuckerberg dib ...
Post Previous:horumarinta hore ee Blockstream abuuro supercomputer a on blockchain
Post Next:Coinbase bilaabmaa imtixaanka kama dambaysta ah ee Segwit
Laga yaabaa 11, 2018 at 6:47 AM
tuva ayaa sheegay in: